Tsy Ireo Mpianatra Ayotzinapa Nanjavona Ireo Faty Hita Tao Atsimo-Andrefan’i Meksika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Novambra 2014 8:10 GMT
Vakio amin'ny teny English, čeština , Français, Português, русский, বাংলা, Deutsch, Español
Sarintavan'ireo mpianatra Meksikana nanjavona irarahan'ny voninkazo kely ho mariky ny hetsika teo anoloan'ny Ambasady Meksikana ao Bogota, Kolombia tamin'ny 7 Nov. Sary tao amin'ny kaonty Flickr-n'ny Agencia Prensa Rural. CC BY-NC-ND 2.0
Tsy ireo mpianatra 43 nanjavona avy ao amin'ny Kolejy Ambanivohitra Raúl Isidro Burgos ao Ayotzinapa ireo faty hita tao anaty fanariam-pako ao Cerro Viejo, La Parota sy Cocula ao amin'ny fanjakana Meksikana ao Guerrero, voalaza fa eo am-panatontosana asa mikasika izany ireo manampahaizana Arzantiniana misahana ny fandiniham-paty.
Namoaka tatitra manokana momba izany vaovao izany ny tambajotram-baovao TeleSur Meksika:
Lahatsary: Tsy ireo mpianatr'i Ayotzinapa ireo faty hita: Manampahaizana Arzantiniana misahana ny fandiniham-paty http://tlsur.net/1xhkKpi #AyotzinapaSomosTodos
Hatramin'ny herinandro voalohan'ny volana Oktobra, nanatontosa fanadihadiana tao amin'ireo fasana tambabe maro ao an-tanànan'i Iguala sy Colula ao atsimon'i Meksika ny ekipa Antrôpôlôjika (Haiolombelona) Misahana ny fandiniham-paty Arzantina (EAAF, amin'ny Espaniola) noho ny fangatahan'ny fianakavian'ireo mpianatra nanjavona. Olona enina no namoy ny ainy tao, 25 naratra ary 43 tsy hita popoka tamin'ny 26 Septambra nandritra ny fifampitifiran'ny polisin'i Iguala sy andian-jiolahy Guerreros Unidos.
Navoitran'ny EAAF tao anatinà fanambarana an-gazety milaza ny vokatra hitany :
Tsara ny manipika fa tamin'ny fitambaran'isan'ireo faty hita tao amin'io toerana io, 28 no nakarin'ny mpiadin'ny biraon'ny lehiben'ny fampanovana ao amin'ny distrika tao amin'ireo fasana dimy voalohany, ary ny roa hafa kosa nakarin'ny biraon'ny lehiben'ny fampanoavana ankapobe tamin'ny fasana fahaenina.
Araka ny filazan'ny mpampanoa lalàna Jesús Murillo Karam, novonoina ireo mpianatra, nodorana ny vatan'izy ireo ary natsipy tao amin'ny renirano San Juan akaikin'ny fanariam-pako ao Colula ny lavenon'izy ireo. Nifototra indrindra tamin'ny fiaiken'[ireo voasambotra] izany fanambarana izany, izay niteraka tsy finoana, fahatezerana sy fahavinirana teo amin'ny fianakavian'ireo mpianatra sy ny Meksikana satria navoaka tsy nisy karazana porofo izany fanambarana izany – tsy hita ireo nofo mangatsiaka.
Tamin'ny andro nanjavonan'ireo mpianatra, dia teo am-panaovana fanangonam-bola amin'ny hetsika karakarainy ry zareo mpianatry Ayutzinapa. Midika izany hoe mangataka fanomezana eny amin'ny lalana be mpandeha, miditra any anaty magazay vitsivitsy ary manavatsava ny lalambe midadasika mihitsy aza, araka ny filazan'ny gazety Espaniola El País. Tamin'ny volana jiona tamin'ny taon-dasa, dia nomen'ny mpianatra tsiny tamin'ny famonoana sy ny fampijaliana ilay mpitarika tambanivohitra Arturo Hernández Cardona sy tamin'ny fanafihana ny vaomieran'ny tanàna ny ben'ny tanànan'i Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
Nahatsikaritra an'i Abarca sy ny vadiny, María de los Ángeles Pineda ho anisan'ireo nanome baiko ny herisetra nihatra tamin'ireo mpianatra ny manampahefana ka nosamborina izy ireo tamin'ny 4 Novambra.
Nandritra izany, mbola tsy hita ireo mpianatra, araka ny sioka nalefan'i Tatosky:
Nilaza ireo manampahaizana Arzantiniana mpanao “autopsie” [mpandinika faty] fa tsy ireo mpianatry #Ayotzinapa ireo faty hita tao anaty fanariam-pako…Nankaiza ny #43?
Nisy ireo fanontaniana vaovao napetraka. Orinasan'ny tantara an-tsangana Tepito Arte Acá avy ao an-tanànan'i Mexico nanontany tao amin'ny Twitter:
Nanipika ny ekipa mpandinika faty fa tsy ireo mpianatra nanjavona ireo faty hita tao amin'ireo fasana iombonana… Fa iza ary ireo?
Vao mainka nahabe fanaintainana ireo vahoaka Meksikana ny fahitana ireo fasana iombonana:
Fihetsika fanaon'ny mpandinika faty ny fandavahana ny tany ao amin'i Guerrero-ako. Mampalahelo izany toe-javatra izany, monina ao Tixtla aho, izay misy ny Oniversite Ayotzinapa.
Nanazava tamin'ny fanambarany ny EAAF fa nanome fitaovana fitiliana ny zenetikan'ireo faty ny Vondrona Teknolojika Bode ao Etazonia. Handefa ny sombin'ireo faty avy ao amin'ireo fasana tambabe hita tao anaty hantsana sy ny reniranon'i Cocula any amin'ny Oniversiten'i Innsbruck ao Aotrishy mba hanaovana fizahana ny biraon'ny lehiben'ny fampanoavana meksikana.
Araho ny fitantarana lalina ataonay: Avereno ireo Mpianatra #Ayotzinapa Tsy Hita ao Meksika